Mayelana NATHI - Jiangsu Huanyi Industrial Co., Ltd.
I-Jiangsu Huanyi Industrial Co, Ltd. iyimboni entsha yobuchwepheshe. Le nkampani izibophezele ekwakhiweni kwemikhiqizo ye-gel ice pack ngobuhle bomuntu siqu / ukugoqa okunempilo nokwelashwa / kwezemidlalo / ukunakekelwa kwansuku zonke okuthomalalisayo nokushisayo kusuka ngo-2012.
Sinikezela ukuphumula, ukwelashwa ngokomzimba nosizo lokuqala ezimpilweni, Imikhiqizo inesitifiketi nge-SGS, FDA, CE, REACH, AZO, PROP65, ifektri enocwaningo lwe-BSCI, sinokuhlangenwe nakho okusebenzisana ne-LIDL, ALDI, Wal-mart neDisney.
Le nkampani inemikhiqizo eminingi yokuthengisa eshisayo efana ne-gel ice pack, i-gel bead mask, i-knee wrist ankle okhalweni olubopha ngeqhwa elishisayo elibandayo, amasokisi okwelapha amakhaza, i-herb microwave heat pad, i-medical bag bag, engaba kabanzi
esetshenziswa ekwelashweni okushisayo nokubandayo kokucindezela, ezemidlalo Ezempilo, ukunakekelwa kukamama nengane, njll. Sihambisana nomgomo "wokudala okuqhubekayo nokwaneliseka kwamakhasimende" futhi sithembekile ngokuthembela ukuwunikeza ngentengo yokuncintisana yempilo enempilo.
Sinomnyango wethu we-R & D ongawenza ngokwezifiso imikhiqizo ngokuya ngomqondo wakho, umshini wokusika we-laser ukuqinisekisa ukwakheka okunembile, ukuphrinta kwe-UV kungenza amaphethini wemibala eminingi, isandla esenziwe isikhunta senza impilo ehlala isikhathi eside emikhiqizweni yakho, ukuphendula kwabasebenzi abangu-120 kokulethwa. Inhloso yethu ukuhlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, engabizi kakhulu ngokulethwa okusheshayo kanye nensizakalo ehamba phambili.
Onke amaphakethe e-ice aya ekuhloleni ukucindezelwa nokuzihlola ngaphambi kwephakeji, ijeli engeyona enobuthi evalelwe ku-PVC, i-EVA, i-TPU ingavuza ngemuva kokushisa ngokweqile noma ingcindezi, okungalungile kulwazi lwamakhasimende, imboni yethu yenza konke lokhu kube ngaphansi kokulawulwa, impendulo wonke amaphakethe eqhwa.
Isabelo sethu Sokuthekelisa
I-Jiangsu Huanyi Industrial Co, Ltd. izibophezele ekukhiqizeni imikhiqizo yekhwalithi ephezulu ebandayo futhi eshisayo. Le nkampani ibandakanyeka ekuthuthukisweni komkhiqizo, ekuthuthukisweni nasekukhiqizweni (yonke inqubo ingaphuza ngqo amanzi ahlanziwe) nokuthengisa. Ngomsebenzi onzima wabo bonke abasebenzi bezobuchwepheshe nabathengisayo, inkampani inikeze ngempumelelo inani elikhulu lemikhiqizo esezingeni eliphakeme ebandayo neyashisayo kumakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe.
Imikhiqizo yethu ithunyelwa emhlabeni wonke, amazwe amakhulu kanye nezifunda zingama-40% eYurophu, 30% eMelika, 15% eJapan no-5% Korea, no-10% kwamanye amazwe noma ezifundeni. Inkampani ibikhonza amakhasimende nge imikhiqizo esezingeni eliphakeme, intengo ephansi, ukulethwa kwesikhathi kanye nedumela elihle. Sethemba ngobuqotho ukubambisana namakhasimende ekhaya aphesheya. Ngemizamo yabo bonke abasebenzi emhlabeni jikelele, sizoba ibhizinisi elihamba phambili embonini futhi ngokuhlanganyela senze ikusasa eliqhakazile lomkhakha wokubanda nokubanda oshisayo!
Amanye amazwe nezifunda
Yiba yilungu lomndeni lapha, bangajabulela umtapo wolwazi kanye nezinsiza zokuqina ukuze babe nempilo efanayo nemikhiqizo yethu!
Uyemukelwa ukuvakashela ifektri yethu noma idokodo lethu minyaka yonke kuma-Fairs nemibukiso.
Yiba nenkulumo nathi, uzothola imikhiqizo yakho efanelekile eshisayo nebandayo yokwelashwa kweqhwa!